Laptops အစုံကို ခေါင်းမစား၊ စိတ်မရှုပ်ဘဲ တနေရာထဲမှာ ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် ~ The ICT.com.mm Blog
ICT.com.mm မှာ ရောင်းချနေတဲ့ Laptops အစုံကို ခေါင်းမစား၊ စိတ်မရှုပ်ဘဲ တနေရာထဲမှာ ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်…
Processer အမြင့်ပိုင်းတွေ၊ နောက်ဆုံးပေါ် CPU အလန်းစားတွေ ရှာနေပြီးလား? ဂိမ်း သွက်သွက် ဆော့ကောင်းမယ့် လက်ပ်တော့မျိုးတွေလား? Editing ကောင်းကောင်းလုပ်ချင်တာလား? ကျောင်းသုံး၊ ရုံးသုံး ရှာနေပြီလား? ပစ္စည်းကောင်း၊ ဈေးနှုန်းမှန်မှန်နဲ့ ခေါင်းမစားဘဲ ရွေးချယ် ဝယ်ယူနိုင်ပြီနော်…
သိချင်တာတွေကိုလဲ message box က တဆင့် မေးရုံနဲ့ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ သေချာရှင်းပြပေးမယ့်သူတွေက အသင့်ဆိုတော့…
Online က laptop ဝယ်ရင် ဂျင်းမိမှာ မပူရတော့ဘူးပေါ့။ နောက်ပြီး တချို့ လက်ပ်တော့တွေက နိုဝင်ဘာလရဲ့ ပရိုမိုးရှင်းထဲမှာလဲ ပါတာဆိုတော့ ပစ္စည်းမကုန်ခင် ကိုယ့် လိုအပ်ချက်တွေ ဖြည့်ဆည်းဖို့ အမြန်သာဝယ်လိုက်တော့နော်…
Newer Panasonic Hand Mixer တွေကို ICT.com.mm မှာ ဈေးသက်သက်သာသာ ဝယ်ယူနိုင်ပြီနော်…
Older Samsung Galaxy Note 20 နဲ့ Samsung Galaxy Note 20 Ultra ဖုန်းတွေကို ဝယ်ယူတိုင်း Up to 6% Promotion